August 2018 – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka: Waxaan Soo Kala Caddeyn Doonnaa Hay’adaha Sida Rasmiga Ah Uga Shaqeeya Dastuurka
August 31, 2018 August 31, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay soo kala caddeyn doonaan hay’adaha ka shaqeeya qabyo tirka dastuurka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa Soomaalida ama kuwa kalaba. Hadalkan ayuu ka sheegay kulanka ku saabsanaa u bandhigidda guddiga joogtada ee Golaha Shacabka shanta cutub ee dastuutka, kaas oo si wadajir ah ay usoo dhammeystireen qabyo tirkiisa guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga labada gole ee dastuurka. waxaaana la soo bandhigayey qaabka loo marey dib u eegista shanta cutub, waxa la beddelay ama la soo kordhiyey, intii wada…
Xildhibaanno Ka Tirsan Labada Gole Ee Baarlamaanka Oo Eedeyn U Jeediyay Madaxweynaha Iyo Reysul Wasaaraha
August 31, 2018 Kalfadhi
Shir wadatashi ah oo qaar ka mid ah xildhibannada labada gole uga socday Muqdisho intii u dhaxeysay 25-kii ilaa 30-kii Agoosto ayaa laga soo saaray war murtiyeed. Arrimaha siyaasadda, aminiga iyo caddaaladda ayeey sheegeen in si toos ah ay ugu fashilmeen madaxda sare ee dowladda. Xildhibaannada ku shirsanaa Muqdisho ayaa ku eedeeyay xukuumadda hakinta wada-hadallada Soomaalilaan, ku xad gudubka hannaanka awood qeybsiga beelaha, eex iyo cadaalad darro. Hannaanka loo maray magacaabista wasiirrada, magaacbista taliyayaasha, safaaradaha agaasimayayaasha joogtada iyo hay’adaha madaxa bannaan ayeey xildhibaannadu aad u dhaliileen. Caburinta iyo caga jugleynta…
Shir Looga Hadlayay Dekadaha Soomaaliya Oo Lagu Soo Gabagabeeyay Dalka Ruwanda
Magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda ayaa soo lagu gabogabeeyey shir Ku saabsanaa dhismaha hey’adda hormarinta maareynta badaha Soomaaliya kaasoo u dhaxeeyey Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxaana aad looga dooday sharciyada iyo xeerarka ay Ku shaqeyn doonto hey’addaan iyo sidoo kale cidda maamuleysa. Sidoo kale waxaa shirkaan qayb ka ahaa guddiga arrimaha dekedaha ee baarlamaanka Soomaaliya si ay si dhow ula socdaan dhismaha hey’adaan iyo howlaha loo idmadey iney qabato. Shirka oo ay soo agaasintay hey’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha baddaha ee International Maritime Organization ( IMO)…
Rw-Ku Xigeenka Soomaaliya Oo Sheegay In Ay Muhiimad Gaar Ah Siin Doonaan Hufnaanta Caddaaladda
August 30, 2018 Kalfadhi
Xilli uu ka hadlayay daah furka hannaan cusub oo Elektaroonik ah, loona adeegsan doono gal-dacweedyada soo gaara laamaha garsoorka Soomaaliya ayuu reysul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed sheegay in hannaanka cusub ee gal-dacweedka Soomaaliya loo baahan yahay in aan meel dhexe looga tagin ee la dardar galiyo howshiisa iyadoo la raacayo nidaam garsoor oo caddaalad ku dhisan oo kasoo billaabanaya booliska. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya; laga soo billaabo madaxweyaha iyo xukuumadduba ay aad uga shaqeyn doonaan sidii caddaaladda Soomaaliya ay ku noqon lahayd mid…
Haweenka Golaha Shacabka Oo Dhageysi Dadweyne Ka Sameeyay Xeerarka Waxbarashada, Caafimaadka Iyo Shaqaalaha Rayidka.
Ururka Haweenka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sameeyay dhagaysi dadwayne oo ku saabsan hindise Sharciyeedyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqaalaha rayidka. Waxaa kulanka lagu casuumay madax ka socotay ururrada bulshada rayidka iyo haweenka u dhaqdhaaqa arrimaha haweenka. Hindise Sharciyeed-yada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa ku jira marxaladda akhirnta koowaad iyagoona horyaalla Golaha Shacabka, halka aan wax akhrin ah la marsiin sharciga shaqaalaha ayidka. Halkan ka daawo, xildhibaanad Caasha Koos oo sharraxeysa kulankooda dhageysiga dadweyne.
Baarlamaanka Dowladda Hoose Warar
Golaha Deegaanka Garowe Oo Doortay Duqa Cusub Ee Caasimadda
August 29, 2018 August 29, 2018 Kalfadhi
Golaha Deegaanka Garowe ayaa maanta duq Cusub u doortay Mudane Axmed Saciid Muuse “Barre ” oo 9-Sano ka mid ahaa xildhibaannada Puntland, isaga oo helay 18 cod. Musharraxii la tartamay oo ahaa mudane Axmed Abshir Jaamac “Bakuuke ” ayaa Isna helay 9 Cod . Guddoomiye Ku Xigeenka degmada Garowe ayaa isna loo doortay mudane Maxamed Cali Maxamed “Xamari ” oo horay u ahaa Macallin Iskuul, sidoo kale 5-tii sano ee u danbaysay kujiray Golaha Deegaanka Garowe . Duda cusub ee Garowe Axmed Muuse Saciid “Barre ” waa ganacsade shirkada korontada…
Taariikhda Nololeed-ka Xildhibaan Faarax Shiikh Cabdulqaadir
Xildhibaan Faarax wuxuu Ku dhashay magaalada Beledweyne oo ah caasimadda gobolka hiiraan sanadkii 1966-dii, wuxuuna dugsiga quraanka Ku dhigtay isla magaalada asagoo quraanka ka bartay dugsi ay lahaayen qoyskiisa. Dugsiga hoose Wuxuu Ku dhigtay Muqdisho dugsigii hoose ee Howlwadaag, wuxuuna Ku laabtay magaalada Beledweyne 1976-dii si uu u dhammeysto waxbarashadii asaasiga aheyd wuxuuna dugsi dhexe dhigtay iskuulkii Sandhool Guure.Halka Sara-na sanadkii 1983-dii kaga baxay Dugsigii Sare ee Axmad Warsame ee isla magaalada Beledweyne. Halkan ka daawo: muuqaal laga duubay xildhibaan Faarax 26-kii bishii 2-Febraayo sanadkii 2001-dii. Hormarinta wax soo saarka…
Xildibaan Sakariye: Golaha Shacabka Iyo Xukuumadda Waxaa Laga Wadaa Qabyaalad Kobcin
August 28, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa xilli uu ka hadlayay kulan ka tirsanaa Kalfadhigii saddexaad waxa uu sheegay in baarlamaanka iyo xukuumadduba ay wadaan qorshe la doonayo in wali lagu sii shaqeeyo nidaamka 4.5 ee qabiilka ku dhisan. Xildhibaan Sakariye waxa uu sheegay in 4.5 lagu soo maamulayay dalka 17-kii sano ee lasoo dhaafay, loona baahanyahay sidii looga gudbi lahaa; xukuumadda iyo Baarlamaankuna ay qasab tahay in ay ka wada shaqeeyaan. Waxa uu sheegay in marnaba aysan suurta gal aheyn fikir uu sheegay in…
La dagaalanka Musuqmaasuqa & Hadallada Iska Dhehda Ah Masaafo Dheer Ayaa U Dhexeysa
Waxaan soo dhoweynayaa mashruuc kasta oo si dhab ah loogula dagaalamayo musuqa heer kasta & nooc walba ee uu leeyahay gaar ahaan kan mu’assasaadka dawladda ka dhex-jira, ee hortaagan in tallaabooyin horumarineed horey loo qaado. Waxaanan marnaba daawo u arkin hadallo iska tuur ah Iyo ficilooyinka is-tustuska u badan ee musuqmaasuqa naaxey korka loogu salaaxayo. Sheekada musuqmaasuq la dirirka ee maalmahaan danbe Muqdisho ka socotay markaan si hoose ugu dhabba-galay, wax aan ku fasiro waa waayey anigoo la aqrinayey dhacdooyinkii is xigxigay ee siyaasadda dalka la soo gudboonaatey muddadii sanadka Iyo…
Xil. Swaqar Oo Ku Baaqay Inay Wada-Shaqeeyaan Baarlamaanka Iyo Xukuumadda
August 28, 2018 August 28, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Swaqar Ibraahim Cabdalla oo kamid ah xubnaha baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay warbaahinta Kalfadhi ayaa ku baaqay wadashaqeyn buuxda oo dhax marta golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay xildhibaanku in dib u dhac laga dhaxlayo haddii ay wada shaqeyn waayaan labada hay’adood ee sharci dejinta iyo fulinta. “ Baarlamaanka oo ka shaqeynaya sharciyadda iyo xukuumadda oo fulinaysa, waa inay yeeshaan xiriir fiican,” ayuu yiri xildhibaan Swaqar Xildhibaanka oo ka jawaabaya su’aal ahayd sida uu u arko waxqabadkii baarlamaanka ee kalfadhigii 3aad, waxa uu…